Mas’uuliyiin kala duwan oo dowladda Federalka ku eedeeyay fashil dhanka amniga ah – Somali Top News
Mas’uuliyiin kala duwan oo dowladda Federalka ku eedeeyay fashil dhanka amniga ah
Gen. Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa Madaxda dowladda Soomaaliya ku eedeeyay inay ku fashilmeen sugida Aminga Caasimadda.
Muungaab ayaa intaa ku daray “Mana muuqato wax Horumar ah oo Hay’adaha Amniga Xukuumadda ka gaareen Sugidda Amniga, Sidoo kale Ma aragno isla xisaabtan dhab ah oo ku wajahan Hay’adaha Dowladda dhexdooda, taas bedelkeedana waxaa Darajo iyo Abaal marin lagu bixinayaa Fashilka lagu dhex jiro”ayuu yiri Gen. Muungaab.
Dhanka kale Wasiirkii hore ee Amniga Soomaaliya C/risaaq Cumar Maxamed, ayaa ka hadlay weerarkii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho,
Waxa uu dowladda Soomaaliya ku eedeeyay ineysan wali la iman qorshe cad oo lagu sugayo amaanka Caasimada, isagoo sugida amniga ku sheegay ineysan ku imaneynin Dhagxaan lagu jaro wadooyinka Caasimada.
Dowladda Soomaaliya ayuu sheegay ineysan qaadan talooyinka amniga lagu horumarin karo ee siiyaan laamaha Nabad gelyada, balse taa bedelkeed ay u aragto iney iyagu yihiin dad mucaarad ah oo kaliya soo bandhigga dhaliilaha dowladda.
Xildhibaan C/risaaq Cumar Maxamed, ayaa sidoo kale habacsanaanta amni ee ka jirta Muqdisho ku sifeeyay iney qeyb ka tahay qorshihii lagu baabi’iyay NISA oo uu tilmaamay iney eheyd Shabakadii ka hortagi jirtay weerarada Shabaab.
Wasiirkii hore ee Amniga Soomaaliya, ayaa sidoo kale su’aal iska weydiiyay sida ay ku timid in la fashiliyo qarax dhacay oo sababay dhimashada 17 qof, wuxuuna Saraakiisha amaanka talo ahaan u siiyay iney isu xil saaraan u shaqeynta Shacabka.
← Dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo Al shabaab oo ka dhacay gobalka Hiiraan
Al shabaab oo afduubtay Askari katirsan ciidanka dowladda →
Madaxweynaha Puntland oo magacaabey guddi gaar ah
Ciidamada amniga oo toogtay Askari dilay mooto Bajaale